Lumavate: Madal-Nidaam Kooban oo Telefoonka Mobilada loogu talagalay Suuqgeeyayaasha | Martech Zone
Lumavate: Madal-Codsiga-Nidaamka-Lacageed ee Mobilada ee Suuqleyda
Axad, Juun 21, 2020 Axad, Juun 21, 2020 Douglas Karr
Hadaadan maqal erayga Horusocod Boggan Horusocod, waa farsamo ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato. Qiyaas duni dhex fadhida inta u dhexeysa degel internet iyo codsi mobilka. Shirkaddaadu waxay rabi kartaa inay lahaato cod adag oo muuqaal ah oo hodan ah oo ka mashquul badan degel internet… laakiin waxay jeceshahay inay iska dhaafto kharashka iyo kakanaanta dhismaha codsi u baahan in la dhex dhigo dukaamada barnaamijka.
Waa maxay Codsiga Shabakadda Horusocodka ah (PWA)?
Haddii shirkaddaadu ay raadineyso inay dirto codsi mobilo ah, waxaa jira caqabado dhowr ah oo ku lug leh oo looga guuleysan karo codsi shabakad horumar leh.
Codsigaagu uma baahna inuu galo muuqaalada qalabka casriga ah qalabka mobilada waxaadna ku siin kartaa astaamo kasta biraawsarka moobiilka halkii.
Your ku soo noqo maalgashiga kuma filna in lagu daboolo kharashka naqshada arjiga moobiilka, dejinta, oggolaanshaha, taageerada, iyo cusbooneysiinta looga baahan yahay dukaamada barnaamijka.
Ganacsigaagu kuma xirna cufnaanta korsashada barnaamijka, taas oo noqon karta mid aad u adag oo qaali ah si loo helo korsasho, kaqeybgal, iyo hayn. Xaqiiqdii, ku dhiirigelinta isticmaale inuu soo dejiyo arjigaaga xitaa ma noqon karto suurtagal haddii ay u baahan tahay meel aad u badan ama cusbooneysiin joogto ah.
Haddii aad u malaynayso in barnaamijka moobiilku yahay ikhtiyaarka keliya, waxaad u baahan kartaa inaad dib uga fikirto istiraatiijiyaddaada. Alibaba waxay u wareegtay PWA markii ay la halgamayeen sidii ay dukaameeyayaashu ugu soo noqon lahaayeen barxadooda eCommerce. U wareegista a PWA waxay shirkadda u kordhisay koror dhan 76% heerarka beddelashada
Lumavate: Dhise-Hoosaad Hoose PWA
Lumavate waa horseed u ah nambar-adeegsiga moobiilka ugu sarreeya suuq-geynta. Lumavate waxay u suurta galisaa suuqleyda inay si deg deg ah u dhisaan una daabacaan barnaamijyada mobilada iyagoo aan lahayn lambar loo baahdo Dhammaan barnaamijyada moobiilka ee lagu dhisay Lumavate waxaa loo soo gudbiyaa sidii barnaamijyo horumarsan oo horumarineed (PWAs). Lumavate waxaa ku kalsoon ururada sida Roche, Trinchero Wines, Toyota Industrial Equipment, RhinoAg, Wheaton Van Lines, Delta Faucet, iyo inbadan.
Shaqaalaynta Degdega ah - Lumavate waxay kuu fududeyneysaa inaad ku dhisto oo aad ku daabacaan barnaamijyada moobiilka dhowr saacadood oo keliya. Waad ka faa'iideysan kartaa mid ka mid ah Qalabkooda Bilowga ah (moodellada barnaamijka) ee aad si dhakhso leh dib ugu magacdari karto ama aad uga dhisi karto barnaamij ka soo xoqista adoo adeegsanaya uruurinta ballaaran ee qalabka, qalabka yaryar, iyo qaybaha.
Si dhakhso leh u daabac - Ka gudub dukaanka app-ka oo samee cusbooneysiin dhab ah oo ku saabsan barnaamijyadaada isla markaaba loo gudbin doono macaamiishaada. Iyo, waligaa ha ka welwelin inaad u horumariso nidaamyo iyo qalabyo kala duwan oo waligood ah. Markii aad wax ku dhisato Lumavate, khibradahaagu waxay u qurux badnaan doonaan dhammaan qaababka.
Qalabka Agnostic - Dhis hal jeer arrimo badan oo qaab ah iyo nidaamyada hawlgalka. Barnaamij kasta oo la dhisay iyadoo la adeegsanayo Lumavate waxaa loo soo gudbiyaa isagoo ah Barnaamijka Hormarinta Webka (PWA). Macaamiishaadu waxay ka helaan waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee adeegsadahooda moobaylka, laptop-ka, ama kaniiniga.
Qiyaasta Mobilada - Lumavate wuxuu ku xiraa koontadaada Google Analytics ee jira si uu kuu siiyo natiijooyin waqtiga-dhabta ah oo aad si dhakhso leh uga faa'iideysan karto. Waxaad marin buuxa u leedahay helitaanka xogta macaamiisha qiimaha leh ee ku saleysan sida, goorta, iyo meesha barnaamijyadaada laga helayo. Iyo, haddii aad u isticmaasho barnaamijyo kale oo falanqeyn ah meheraddaada, markaa waxaad si fudud ugu dhexgeli kartaa Lumavate aaladda aad doorbideyso oo xogtaada oo dhan hal meel ku wada dhig
Lumavate waxay ku baahisay PWAs warshadaha oo dhan, oo ay ku jiraan CPG, Dhismaha, Beeraha, Hawlgelinta Shaqaalaha, Madadaalada, Dhacdooyinka, Adeegyada Maaliyadeed, Daryeelka Caafimaadka, Marti gelinta, Soosaarka, Makhaayadaha, iyo Tafaariiqda.
Jadwalka Demo Lumavate ah
Tags: lambar-hooseeyalumavatedhise barnaamijka mobiladacodsiga mobile
ShortStack: Bogagga Degitaanka ee Facebook iyo Mudaaharaadka Bulshada ayaa Fudud